China Direct Line ọrụ na gị n'ụlọnga | Sunson
Banye / ndebanye aha
Ndi anyi bu
Gịnị kpatara sunson
Olee otu o si aru oru
Wlọ nkwakọba ihe China
bulie & mkpọ mezuo
Ọrụ bara uru
Ọrụ mbupu zuru ụwa ọnụ
Sochie ngwugwu gị
Site na imekorita na Hongkong kwụsiri ike ikuku na ọdụ ụgbọelu na-eduga ụwa na mba Europe na US, SunsonExpress Direct Line bụ ngwakọta na ọrụ nzipu ozi na DDP (Kwupụta Ọrụ Akwụ ụgwọ). Anyị na-etinye ụgbọ elu site na Hongkong gaa n'ọnụ ụzọ ámá kwa ụbọchị ma jide otu ụbọchị nnabata omenala. Ọ bụ 100% na-achịkwa kpamkpam na ngwongwo ikuku na nnyefe kilomita ikpeazụ bụ nke bụ azịza akụ na ụba na nnyefe ọsọ ọsọ nke kachasị na-eme maka ngwugwu e-commerce.
Mmezu Mbupu Si China Gaa Brazil
Akara pụrụ iche nke Sunson nke Brazil jikọtara akụ ụgbọ elu Hong Kong dị elu yana ọrụ nzipu ozi Brazil, nke bụ nhọrọ mbufe bara uru maka Brazil. Ọ na-eme nke ọma na usoro ọsọ njem na nnyefe nnyefe, na ngwugwu ahụ nwere ike soro n'ime usoro niile. Ọ bụ nhọrọ kacha mma maka ibuga Brazil.
Koodu ọrụ Oge na-agabiga
(ụbọchị ọrụ) Ihe ndị anabatara Na ọdabara kwuru uru
BR-OKWU 10 ~ 20 General mbupu
mmiri mmiri & anam-elu mbupu Ekwupụtara uru ＜ 50USD nwere ọrụ na VAT
Mmezu Mbupu Si China Gaa United States
Iji mejuo ndị ahịa site na iji ụgbọ njem ngwa ngwa na ọnụ ahịa ụgbọ njem si China gaa United States, Sunson's US Line jikọtara akụrụngwa ụgbọ mmiri dị elu na Mainland China na Hong Kong, yana DHL na nnyefe ọnụ ahịa USPS na ọrụ nnabata ngwa ngwa na United States, nke na-emeziwanye njem njem njem ma na-ebelata ụgwọ njem, ịchọta ozi nchịkọta dị mgbe etinyechara iwu ahụ, a na-enyocha usoro niile. Ọ nwere ike ịnabata ngwaahịa batrị na ngwaahịa mmiri mmiri. O adabara maka ibugharị ngwaahịa dị oke mkpa na nke na-ewe oge.
US-GESSKWUO 9 ~ 14 General mbupu
mmiri mmiri & anam-elu mbupu Ekwupụtara uru ＜ 800USD nwere ọrụ na VAT
Mmezu Mbupu Site na China Na Israel
Sunson nke Israel pụrụ iche na - ejikọ akụ na ụgbọ elu dị elu na Hong Kong na ọrụ awara awara na Israel. Ahịrị ahụ kwụsiri ike. Mgbe nnyefe, a na-enye nọmba nsuso ozugbo. Dum usoro nsuso na-ekwe nkwa. Ọnụahịa ahụ dị mma ma ọnụego nnyefe ahụ dị elu. Iji nye gị ahụmịhe njem njem ọsọ ọsọ na nke akụ na ụba, nwere ike ịnabata ngwaahịa batrị, ngwaahịa mmiri mmiri, bụ nhọrọ kachasị mma si China gaa Israel.
Koodu Mbupu Oge na-agabiga
IL-OKWU 10 ~ 15 General mbupu
mmiri mmiri & anam-elu mbupu Ekwupụtara uru ＜ 75USD nwere ọrụ na VAT
China Iji Brazil Direct Lines
Inddị Post Service Direct Lines Express
Ọrụ nkwakọba China
Okwu ： C102 No.4 xiaolong ụzọ tongsheng obodo dalang n'okporo ụzọ longhua district shenzhen city guangdong